အော်တိုဂီယာနှင့် သတိပြုစရာ ..! - Car Knowledge in Myanmar ::: iCar.com.mm
အော်တိုဂီယာနှင့် သတိပြုစရာ ..!
ဗဟုသုတ |6Jul 2017 3:00 pm | 4276 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
Posted by အေးမြတ်သူ (iCar.com.mm) အနှစ်သက်ဆုံးစာရင်းသို့ထည့်ရန်
အော်တိုဂီယာနဲ့ မန်နျူရယ်ဂီယာ ၂ မျိုးမှာ အော်တိုက ကားမောင်းရ တဲ့လူ သက်သာတာကြောင့် ပိုပြီးလူ ကြိုက်များပါတယ်။ လူစီးကားတွေထဲ မှာ အော်တိုဂီယာပါတဲ့ကားတွေ များ လာပါတယ်။ လူစီးကားတွေထဲမှာ အော်တိုဂီယာပါတဲ့ကားတွေ များလာ ပါတယ်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး လူ သက်သာတယ်။ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရ တာနည်းတယ်။ Manual ဂီယာမှာဆို ရင် ကလပ်ပလိပ်အုံနဲ့၊ ကလပ်ဆုံတွေ ပါနေတယ်။ ကလပ်ဝါရှာပေါက်တာ ကလပ်ပလိပ်ပြားလဲရတာတွေ အလုပ် ပိုတယ်။ ကလပ်ပြဿနာတွေက မကြာခဏဆိုသလို ဖြစ်တတ်တယ်။ ကားမောင်းတဲ့အခါမှာလည်း ကလပ် ခြေနင်းတံကို အမြဲနင်းပြီးမှ ဂီယာ ပြောင်းလို့ရတယ်။ မြို့ထဲမှာ ကားကျပ် တဲ့အချိန်ဆိုရင် ကလပ် ခဏခဏ နင်းနေရလို့ ကြာရင် ဒူးဆစ်တွေ၊ ခြေထောက်တွေညောင်းလာတယ်။ ကြာကြာကားမောင်းရင် Manual ဂီ ယာက လူကိုပင်ပန်းစေတယ်။
အော်တိုဂီယာစနစ်မှာတော့ က လပ်ရဲ့အလုပ်တာဝန်နဲ့ ဂီယာဘောက်စ်အလုပ်တာဝန် နှစ်မျိုး စလုံးကို အလိုအလျောက်ဆောင်ရွက် ပေးတယ်။ ကားမောင်းရတဲ့သူသက် သာတယ်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ် သက်သာတယ်။ ATF (Automatic Transmission Fluid) ပါဝါဆီ မှန်မှန် လဲပေးရုံးဘဲ။
အော်တိုဂီယာစနစ်မှာ ယေဘု ယျအားဖြင့် အစိတ်အပိုင်း ၃ မျိုးပါ ဝင်တယ်။
(၁) တော့ကွန်ဗာတာ (Torque Converter)
(၂) ပလန်နက်ထရီဂီယာ (Planetary Gear Unit)
(၃) ဟိုက်ဒြောလစ်ထိန်းချုပ်ယူ နစ် (Hydraulic Control Unit)
တော့ကွန်ဗာတာ (Torque Converter) ကတော့ အော်တိုဂီယာ ဘောက်စ်စနစ်ရဲ့ အဓိက မောင်းနှင် အား ယူနစ်ဖြစ်တယ်။ ကားသမား တွေ အလွယ်ခေါ်ကြတာတော့”သ ပိတ်လုံး” တဲ့။ သပိတ်နဲ့ပုံစံတူလို့ခေါ် တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
တော့ကွန်ဗာတာ (Torque Converter)
တော့ကွန်ဗာတာဆိုတာ ဟိုက် ဒြောလစ်ပါဝါဆီတွန်းအားနဲ့ အင်ဂျင် လည်အား (Torque) ကို ကူးပြောင်း ပေးနိုင်တဲ့ ကိရိယာဖြစ်လို့ တော့ကွန် ဗာတာလို့ခေါ်တာပါ။ တော့ကွန်ဗာတာမှာ Pump Impeller, Turbine Runner နဲ့ Stator တို့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ Impeller နဲ့ Turbine ကြားမှာ Stator ရှိတယ်။ တော့ကွန်ဗာတာအတွင်းပိုင်း မှာ ATF လို့ခေါ်တဲ့ ပါဝါဆီရှိတယ်။ ဒီပါဝါဆီက Auto ဂီယာရဲ့အသက်ပါ ဘဲ။ ATF ဆိုတာ Automatic Transmision Fluid ဆိုတဲ့ ဟိုက်ဒြောလစ် ပါဝါဆီရဲ့ အတိုကောက်စကားလုံးပါ။ အင်ဂျင်ဖလိုင်းဝှီးလည်ပါက Impeller ပါလိုက်လည်တယ်။ Impeller မှာ ပါဝါဆီကိုခတ်ပေးနိုင်တဲ့ ဒလတ်တွေ ပါတယ်။ Impeller လည်ရင် ပါဝါဆီ တွေပါလိုက်ပြီးလည်တယ်။ Impeller လည်အားကြောင့် ပါဝါဆီတွေဟာ Stator ကိုဖြတ်ပြီး Runner တာဘိုင် ဒလက်တွေကို ရိုက်ခတ်မိတာကြောင့် Runner တာဘိုင်ပါလိုက်ပြီးလည် တယ်။
အင်ဂျင် Torque လည်နေတဲ့အချိန် မှာ အင်ဂျင်ဖလိုင်းဝှီးကလည်း တစ် ပတ်ချင်းလည်နေတဲ့အတွက် တော့ ကွန်မာတာအုံထဲမှာရှိတဲ့ ပါဝါဆီရဲ့ တွန်းအား၊ ဖိအားဟာ အားနည်းနေ တယ်။ ဒါကြောင့် အင်ဂျင် မှာ တော့ ကွန်ဗာတာအလုပ်မလုပ်ဘူး။ လီဗာနင်းပြီး အင်ဂျင်စက်ရှိန်မြင့်တက် လာတာနဲ့ ကွန်ဗာတာစပြီးအလုပ်လုပ် တယ်။ အော်တိုဂီယာစနစ်မှာ အင် ဂျင်ရုန်းအား လှည့်အား (Torque) ကို တော့ကွန်ဗာတာကနေတဆင့် အော်တိုဂီယာအုံကို လည်ပတ်စေတာ၊ ATF ပါဝါဆီစီးဆင်းမှုတွန်းအားကြောင့် ဖြစ်တယ်။
တော့ကွန်ဗာတာမှာ အင်ဂျင် လှည့်အားကိုလွှဲပြောင်းပေးတာ။ ATF ပါဝါဆီရဲ့ တွန်းအားက အဓိကဘဲ။ Impeller မှာ Blades ဒလက်တွေ တပ်ဆင်ထားတယ်။ Impeller လည် ပတ်ရင် Blade တွေရဲ့ ရိုက်ခတ်မှု ကြောင့် ပါဝါဆီတွေလိုက်လည်တယ်။ ပါဝါဆီတွေက Stator ကိုဖြတ်စီးပြီး မှာရှိတဲ့ တာဘိုင်ဒ လက်တွေကို သွားရိုက်တယ်။ ပါဝါဆီ တွေ Stator ကို ဖြတ်သန်းတဲ့အချိန် မှာ ဥငူ်သတ တွေ ပိုပြီးအားကောင်း လာတယ်။ ပါဝါဆီရဲ့တွန်းအားကြောင့် Turbine Wheel လိုက်လည်ပြီး Converter လည်ပတ်ရခြင်းဖြစ်ပါ တယ်။ Auto Gear စနစ်မှာ အင်ဂျင် လှည့်အား၊ ရုန်းအား (Torque) ကို ပို့လွှတ်ရာမှာဖြစ်စေ၊ ဆပွားတိုးပြီး အားပိုမိုကောင်းလာစေရန်ဖြစ်စေ၊ အဓိ ကလုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာကတော့ ATF လို့ခေါ်တဲ့ ဟိုက်ဒြောလစ်ပါဝါဆီ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Impeller နဲ့ Turbine ကြားမှာ Stator ရှိတယ်။ Stator ရဲ့ တာဝန် က Impeller နဲ့ Turbine နှစ်ခုကြား မှာရှိတဲ့ Oil Flow Circuit ကို မြင့် တင်ပေးဖို့ဘဲ။ အင်ဂျင်လည်ပတ်တာ နဲ့ Impeller လိုက်လည်ပြီး၊ ဟိုက် ဒြောလစ်ပါဝါဆီတွေကို Impeller ဒလက်တွေကတွန်းတယ်။ Impeller နဲ့ Turbine ကြားထဲမှာ Stator ရှိ နေတာကြောင့် တွန်းပို့လိုက်တဲ့ပါဝါဆီ တွေရဲ့ ဦးတည်ရာလမ်းကြောင်းပြောင်း လဲသွားပြီး ပါဝါဆီရဲ့ Oil Flow စီး ဆင်းမှုနှင့် ဖိအားကို တိုးပွားစေတယ်။ ဒီလိုမျိုး ပါဝါဆီလည်ပတ်ရာလမ်း ကြောင်းကို “Vortex Flow” လို့ခေါ် ပါတယ်။ Vortex Flow ကြောင့် အော်တိုဂီယာစနစ်မှာ Driving Efficiency ကို တိုးတက်စေတယ်။ ဒီလို မျိုး စွမ်းဆောင်ရည်တိုးပွားစေတာ ကြောင့် တော့ကွန်ဗာတာရဲ့ စွမ်းအား မြှင့်တင်ပေးနိုင်မှုဟာ ၂ ဆကျော်တိုး လာတယ်။ Impeller ရဲ့ လည်ပတ် မှု ၉၀ ရာနှုန်းကို Turbine သို့ပို့ဆောင် ပေးနိုင်ပါတယ်။
အော်တိုဂီယာစနစ်မှာ ဟိုက် ဒြောလစ်စနစ်နဲ့ အလုပ်လုပ်နေတာ ကြောင့် ATF (ခေါ်) ဟိုက်ဒြောလစ် ပါဝါဆီဟာ အဓိကကျပြီး အရေးကြီး ပါတယ်။ အော်တိုဂီယာစနစ်ပျက်စီး ချွတ်ယွင်းရတဲ့ အကြောင်းတရားတွေ ထဲမှာ၊ ပါဝါဆီ Level ကျပြီး ဆီနည်း လွန်းနေတာမျိုး၊ ပါဝါဆီအရည်အသွေး ကျတာမျိုး၊ ပါဝါဆီသစ်လဲမပေးဘဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ မိုင်ပေါင်းများစွာသုံး နေတာမျိုး၊ ATF ဆီမျိုးအစား ရွေး ချယ်မှုမှားနေတာမျိုး ဒီအချက်တွေက အော်တိုဂီယာပျက်စီးစေတာပါပဲ။
ATF ပါဝါဆီဆိုတာ အော်တိုဂီ ယာစနစ်မှာ ဂီယာသွားတွေ၊ ပီနီယံ တွေလည်ပတ်နေတဲ့ အစိတ်အပိုင်း တွေ၊ ဘောလ်ဘယ်ရင်တွေအတွက် ချောဆီဖြစ်တယ်။ အော်တိုဂီယာ ဘောက်စ်အလုပ်လုပ်လည်ပတ်ရာက နေ အပူတွေထွက်လာတယ်။ အပူ ချိန်မြင့်တက်မလာအောင် ATF ပါဝါ ဆီက အအေးခံပေးတယ်။ အင်ဂျင်က ရုန်းအားကို တော့ကွန်ဗာတာမှတဆင့် ဂီယာတွေ အဆင့်မဆင့်ခံပြီး နောက် ဆုံး Drive Train သို့ရောက်စေတဲ့အ ရာကလည်း ATF ပါဝါဆီပါဘဲ။
အော်တိုဂီယာစနစ်မှာ ထိန်းချုပ် မှုအပိုင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးတာ၊ ဟိုက်ဒြောလစ်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အော်တိုဂီယာစနစ်အတွင်းမှာ ဘရိတ်တွေ ကလပ်တွေ အလုပ်လုပ်စေတာလဲ ATF ပါဝါဆီဖိအားပါဘဲ။ ဒါကြောင့် အော်တိုဂီယာစနစ်မှာ ATF ပါဝါဆီဟာ အဓိကကျတဲ့အချက်ပါဘဲ။
Manual Gear မှာ အသုံးပြုတာ ကြာသွားရင် ကလပ်ပလိတ်လိုက်နာ တွေစားပြီး ကလပ်ပလိတ်ချော်ရာက နေ ကလပ်ပလိတ်လောင်သွားနိုင်ပါ တယ်။ ကလပ်ညှော်နံ့တွေထွက်ပြီး အင်ဂျင်ဆွဲအား၊ ရုန်းအားကို ဂီယာ ဘောက်စ်ရောက်အောင်မပို့နိုင်တာမျိုး ကို ကလပ်စလစ်ဖြစ်တယ်လို့ ခေါ် ပါတယ်။
အော်တိုဂီယာမှာလည်း ဒီလိုမျိုး စလစ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဂီယာထိုးတံ ကို “N” ကနေပြီး “D” ကိုပြောင်းထိုး၊ လီဗာနင်းကြည့်ပါ။ အသံထူးထူးခြား ခြားမြည်လာပြီး ကားမဆွဲဘဲ တုံ့ဆိုင်း တုံ့ဆိုင်းဖြစ်နေခဲ့လျှင် စလစ်ဖြစ်ချစ် တဲ့လက္ခဏာမျိုးပါပဲ။
အော်တိုဂီယာဘောက်ထဲမှာ ATF ပါဝါဆီနည်းပြီး ဆီ Level ကျ နေခဲ့လျှင် ပါဝါဆီဖိအားကျဆင်းပြီး စလစ်ဖြစ်စေပါတယ်။ အော်တိုဂီယာ မှာ တစ်ခုခုချွတ်ယွင်းတဲ့လက္ခဏာပြ ရင် ATF ပါဝါဆီကို စစ်ဆေးပါ။ ပါဝါဆီနည်းသွားရင် ကွန်ဗာတာက ဆီဖိအားအပြည့်အဝမရတော့ဘဲ တုံ့ ဆိုင်းစေပါတယ်။ ပါဝါဆီ Level တိုင်းတဲ့ဒုတ်တံနဲ့ ဆီ Level တိုင်း ကြည့်ပါ။ ဆီလျော့နေရင် ဆီထပ် ဖြည့်ပါ။ ဆီထည့်တာများသွားပြီး Level ကျော်သွားတာမျိုးလည်း မဖြစ်ပါစေနဲ့။
ATF ပါဝါဆီရဲအရောင်အသွေး ကိုစစ်ပါ။ အနီရောင် သို့မဟုတ် နီညှိ ရောင်ပျော့ပျော့ရှိရင် ဆီအခြအနေ ကောင်းပါတယ်။ ဆီအရောင်မည်း ညစ်နေပြီဆိုရင်တော့ ပါဝါဆီဖောက် ချပြီး အသစ်လဲလိုက်ပါတော့။
အော်တိုဂီယာစနစ်မှာ လည်ပတ် နေတဲ့ ATF ပါဝါဆီဟာ ဖိအားများ တာကြောင့် အပူချိန်မြင့်တက်လာပါ တယ်။ ATF ပါဝါဆီတွေရဲ့ အပူတွေ ကို Oil Cooler က အအေးခံပေးပါ တယ်။ Oil Cooler ကို အင်ဂျင်အ အေးခံစနစ်နဲ့ တွဲဖက်ထားပါတယ်။ တကယ်လို့ ATF ပါဝါဆီရဲ့ အရောင် ဟာ နို့ရောထားတဲ့ အညှိရောင်မျိုး ပြောင်းနေပြီးဆိုရင်တော့ ပါဝါဆီထဲမှာ ရေရောက်နေပါပြီ။ ရေရောနေတဲ့ပါဝါ ဆီဟာ အော်တိုဂီယာစနစ်အတွက် အလွန်အန္တရာယ်များပါတယ်။ ချက်ချင်းဖောက်ချပြီး ဆေးကြောသန့်ရှင်း ပြီးမှ ဆီသစ်ထည့်ပါ။
ခရီးမိုင် ၁၅၀ဝဝ ကနေ မိုင် ၃၀ဝဝဝ လောက်သုံးပြီးတိုင် ATF ပါဝါဆီလဲလှယ်ပေးပါ။ ATF ပါဝါဆီကို ထုတ်လုပ်သူညွန်ကြားထားတဲ့ဆီအမျိုးအစားကိုဘဲ သုံးရပါတယ်။ ပိုင်ရှင် လက်စွဲစာအုပ်မှာ ATF ပါဝါဆီအမျိုး အစားကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဆီတိုင် တဲ့ ဒုတ်တံ (Dipstick) မှာလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အော်တိုဂီယာစနစ်မှာ ATF ပါဝါ ဆီတွေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ယိုစိမ့် နိုင်ပါတယ်။ ဆီနည်းသွာရင် အော်တို ဂီယာစနစ်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ ဒါ ကြောင့် ဆီ Level ကို ဂရုစိုက်စစ် ဆေးပါ။ ဆီအရောင်ကိုစစ်ဆေးပါ။ မိုင် ၃၀ဝဝဝ ထက် ပိုမသုံးပါနဲ့။ ဆီသစ် လဲပေးရင် အမျိုးအစားမှန်တာကိုဘဲ သုံးပါ။ အော်တိုဂီယာပျက်ရင် ပြင်သုံး လို့မရပါဘူး။ အလုံးလိုက်အသစ်လဲ ပေးရပါတယ်။
သက်တမ်းကြနေပြီဖြစ်တဲ့ 1999, 2000, 2001, 2002 model ကားတွေမှာ ATF ပါဝါဆီကို ဂရုစိုက် ပေးပါ။ Used ကားဝယ်ရင် ATF ပါဝါ ဆီကိုစစ်ဆေးပြီး လိုအပ်ပါက ဆီအ သစ်လဲပေးပါ။ အင်ဂျင်တစ်လုံးရဲ့ အသက်ဟာ အင်ဂျင်ဝိုင်ဖြစ်သလို အော်တိုဂီယာတစ်လုံးရဲ့အသက်ဟာ လည်း ATF ပါဝါဆီဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Credit : ဆရာ KMA